Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247995 times)
« Reply #480 on: August 12, 2011, 10:01:46 AM »
" အ ကုန် လုံး ဗိုလ် တွေ ချည်း ပဲ "
အရက်ဘားတစ်ခု`၌ လူအချို့ သည် တိုက်ပွဲတစ်ခုအကြောင်း စိတ်အားထက်သန်စွာ
ဆွေးနွေးနေကြသည် ။ တိုက်ပွဲအကြောင်းကို ပြန်ပြောင်းပြောနေသူ လက်ဖတင်နင်
ဆိုသူကို ကပ္ပတိန် ဆိုသူက ရံဖန်ရံခါ စကားဖြတ်ပြီး လိုအပ်သော ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်
ချက်များ လုပ်သည် ။ တစ်ဖန် မိမိကိုယ်မိမိ ဗိုလ်မှူး ဟု ဆိုသူက ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်
ပြောဆိုပြန်သည် ။ ဤတွင် လူတစ်ယောက်က မနေနိုင်တော့ပဲ အောက်ပါအတိုင်း
" မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျား..။ ကျနော်ဟာ ဒီတိုက်ပွဲများမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့သတိရနိုင်အောင် ကျနော် ပြန်ပြောပြပါ့ါမယ်.. "
ဤသို့စကားချီကာ တိုက်ပွဲအကြောင်းကို အစ မှ အဆုံး အသေးစိတ် ပြောပြသည် ။
ဗိုလ် ဆိုသူများ ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် ၄င်းအား ငေးကြည့်ကြသည် ။ ထိုသူ ဘားမှ
ထွက်ရန်ပြင်သည် ။ ဘားမင်း က မေးသည် ။
" အဲ့ဒီတုန်းက မိတ်ဆွေရဲ့ရာထူးအဆင့်က ဘာပါလဲ ခင်ဗျာ.. "
" ကျနော် ရိုးရိုးရဲဘော် ပါပဲ...။ ကိုင်း ..ကျနော့် အရက်ဖိုး ဘယ်လောက်ကျသလဲ "
" တစ်ပြားမှ မပေးပါနဲ့ခင်ဗျာ..။ ဘားကို စဖွင့်ကတည်းက ရိုးရိုးရဲဘော် ဆိုလို့မိတ်ဆွေ
တစ်ယောက်ကို ကျနော် တွေ့ ဖူးလို့ ပါ.. "
« Reply #481 on: August 12, 2011, 10:11:13 AM »
" ၀ိုင် အ ရက် ပဲ သောက် ချင် တယ် "
သင်္ဘောပျက်သဖြင့် သင်္ဘောသားတစ်ယောက် လူသူမရှိသော ကျွန်းတစ်ကျွန်းသို့ 
ရောက်သွားသည် ။ ထိုကျွန်းတွင် ၄င်း တစ်ဦးတည်း သုံးနှစ်ကြာ ပျင်းရိစွာ နေနေ
ရသည် ။ တစ်နေ့ တွင် ၄င်းရှိရာ ကျွန်းဘက်သို့စည်ကြီးတစ်ခု မျောလာသည် ။
အထဲတွင် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကို ၄င်း တွေ့ လိုက်ရသည် ။ ၄င်းကဲ့သို့ သင်္ဘော
ပျက်ပြီး ရောက်လာဟန်တူသည် ။ အမျိုးသမီးက ၄င်းကို ၀မ်းသာအားရ နှုတ်
" မင်္ဂလာပါရှင်.....ရှင် ဒီမှာရောက်နေတာ ကြာပြီလား "
" သုံးနှစ် ရှိပြီ "
" အခု ကျမကို တွေ့ လိုက်ရတော့ ရှင် သိပ် ၀မ်းသာသွားမှာပေါ့ နော် "
" သေလိုက်ပါတော့...စည်ထဲမှာ ၀ိုင်အရက် မပါဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေ့ါ "
« Reply #482 on: August 12, 2011, 10:18:23 AM »
" သေ မဲ့ သာ ကြံ "
ဆပ်ကပ်ရုံတွင် ပညာသည်နှစ်ဦး ကောင်းကင်ကျွမ်းဘား ကစားပြသည့် အခန်းကို
ရင်တဖိုဖို နှင့် ကြည့်နေကြသည် ။ အရေးအကြီးဆုံး အကွက်သို့ရောက်လာသည်။
အပေါ်ဘားမှ လူက အောက်ဘားမှ လူထံ အချိန်ကိုက် လွှဲဆင်းရမည် ဖြစ်သည် ။
လေထဲတွင် လွင့်လာသောလူကို အောက်ကလူက မကျအောင် ဖမ်းရမည်ဖြစ်သည်။
ဘားတန်းကို အရှိန်ရအောင် လွှဲနေသော အပေါ်ကလူကိ်ု အောက်ကလူက လှမ်းအော်
" ဟေ့ကောင်. ငါ့မိန်းမကို မင်း ကြာကူလီ ရိုက်တယ်ဆိုတာ ငါ့မိန်းမက ငါ့ကို ၀န်ခံလိုက်
ပြီ....ခွေးမသား... ခုန်ဆင်းခဲ့စမ်း.... "
« Reply #483 on: August 12, 2011, 10:54:57 AM »
" စော စော က ပြော ရော ပေ့ါ "
ဒဏ်ရာဖြင့် ဆေးရုံရောက်လာသော စစ်သားက ဆရာဝန်ကို ပြောသည် ။
" ဒေါက်တာ .. ကျနော့် အနာကို ဘာဖြစ်လို့ခဏခဏ ထိုးကြည့်နေရတာလဲ..
" သည်းခံလိုက်ဦး... အထဲရောက်နေတဲ့ ကျည်ဆံကို ထုတ်ပစ်မှ ဖြစ်မှာမို့ ပါ "
" စောစောက ပြောရောပေါ့ ဆရာရယ်... ကျည်ဆံက ကျနော့် အိတ်ထောင်ထဲ
မှာ ခင်ဗျ.. "
" မျက် မှန် တတ် ပါ "
သူငယ်ချင်းမ နှစ်ယောက် စကားပြောနေကြသည် ။
" ဆရာဝန်က အိုင့်ကို မျက်မှန်တတ်ခိုင်းတယ်...စာဖတ်ရင် မျက်မှန်တတ်ပြီးမှ
" ဟုတ်လား...တတ်ပြစမ်းပါ.. ကြည့်ရအောင် "
" ယူက အိုင် မျက်မှန် တတ်မယ်ထင်လို့ လား...ဘယ်တော့မှ မတတ်ဘူး..စာမဖတ်ပဲ
« Reply #484 on: August 12, 2011, 11:09:27 AM »
" ကျ မ ကို မ မေ့ နဲ့နော် "
ဘဏ်ကို ဓားပြတိုက်သည် ။ ရုပ်ရည်ချောမောသော လူငယ်ဓားပြသည်
ပိုက်ဆံထုပ်ကို လွယ်အိတ်ထဲ ထည့်သည် ။ ဘဏ်စာရေးမက ပြောသည် ။
" ဒီအထုပ်ထဲမှာ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ သုံးသိန်း ရှိတယ်.. အတိအကျပဲ.. ..ဒါနဲ့ 
ကျမနာမည်က ဘက်တီစမစ် .....နေတာက ပတ်အဲဗင်းနယူး.... တိုက် ၁၆
အခန်း ၂၀၀ ဖုန်းနံပါတ်ကတော့..၂၃၁ ၄၅ ၇၈ မမေ့နဲ့ နော်.. "
" နား ချင် တယ် "
လျှော်ရ ဖွတ်ရ ၊ ဆေးကြောရ ၊ မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့သော ကလေးတွေကို
ထိန်းရနှင့် တစ်နေကုန် အလုပ်လုပ်ပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသော မိန်းမသည် မိမိ
အား အလုပ်မှ ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း တင်းကျပ်စွာ ဖက်ထားသော ယောင်္ကျား
ကို ပြောသည် ။
" သူများ ယောင်္ကျားတွေဆိုရင် အားလုံး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး အလုပ်က ပြန်လာကြ
တာချည်းပဲ.. ရှင့်ကျတော့ ဒီလို မဟုတ်ပါလား နော်..... "
« Reply #485 on: August 12, 2011, 11:20:44 AM »
" နောက် ဆုံး နေ့"
" သူငယ်ချင်း မင်း မျက်နှာလဲ မကောင်းပါလား.. ဘာဖြစ်လို့ လဲ.. "
" တစ်ပတ်တိတိ စကားမပြောဘူးလို့ငါ့မိန်းမက င့ါကို သစ္စာဆိုထားလို့ ပါ "
" ဒါများ စိတ်မကောင်း ဖြစ်စရာလားကွာ... "
" မင်း ငါပြောတာကို နားမလည်ဘူး ထင်တယ်...၊ ဒီနေ့ ဟာ နောက်ဆုံးနေ့ကွ "
" တစ် ခု ပဲ မေ တ္တာ ရပ် မယ် "
ဆရာဝန်က လူနာ၏ ဇနီးကို ပြောသည် ။
" ခင်ဗျား ယောင်္ကျားရဲ့ အခြေအနေကတော့ လုံးဝ အားရစရာ မရှိဘူးဗျာ.... ခင်ဗျား
သူနဲ့စကားပြောချင်ရင်တော့ ကျနော် ပြောခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ စိတ်နှလုံး
ထိခိုက်စေမဲ့ စကား တစ်ခွန်းမှ မပြောမိဘို့အထူးသတိထားပါ.. အခုအချိန်မှာ သူ
စိတ်လှုပ်ရှားလို့မဖြစ်ဘူး.. "
" ကျမ နားလည်ပါတယ်...။ သေတမ်းစာ ရေးထားပေးဖို့ ပဲ ကျမ သူ့ ကို တောင်းပန်
မှာပါ ရှင် "
« Reply #486 on: August 12, 2011, 02:08:49 PM »
" ကြိုက် လို့ဟုတ် ဖူး "
စတိတ်ရှိုး ကြည့်နေသူ တစ်ဦးက ဘေးကလူကို နားမလည်ဟန်ဖြင့်
" အခုလေးတင် အဆိုတော်ကို ခရမ်းချဉ်သီးပုတ်နဲ့ပစ်တယ်....ဟော
အခုကျတော့ ခင်ဗျားပဲ လက်ခုပ်သြဘာ ပေးနေပါလား. "
" ပရိတ်သတ်ကို အလေးပြုဖို့နောက်တစ်ကြိမ် သူထွက်လာအောင် ခေါ်
တာပါ ကျနော့်ဆီမှာ ခရမ်းချဉ်သီးအပုတ် နှစ်လုံး ကျန်နေသေးတယ် "
« Reply #487 on: August 12, 2011, 02:18:23 PM »
" တိတ် တိတ် ဆိတ် ဆိတ် "
မိတ်ဆွေ နှစ်ယောက် ဆုံကြသည် ။
" ကျနော့် အိမ်သားတွေ အားလုံး သူ့ အလုပ်နဲ့ သူ မအားကြဘူး.. မိန်းမက
တယောထိုး သင်တယ်...၊ သမီးက စန္ဒရား တီးတယ်........သားကတော့
" ခင်ဗျားက ဘာလုပ်သလဲ.. "
" တိတ်တိတ်လေး ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံနေရတာပေါ့... "
" အ ရင် မ လို ဘူး.. "
လက်မှတ်စစ်က ရထားစီး ခရီးသည် မိန်းမကြီးကို ပြောသည် ။
" အစ်မကြီး အခုစီးတဲ့ ရထားက အမြန်ရထား..၊ အစ်မကြီးရဲ့လက်မှတ်က
ရိုးရိုး ရထားလက်မှတ်..၊ အဲ့ဒါကြောင့် ပိုက်ဆံ ထပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်.. "
" ဘာဖြစ်လို့ပေးရမှာလဲ ၊ ရထားကို အရှိန်လျှော့ မောင်းချင် မောင်းလိုက်
ငါ အလျှင် မလိုဘူး ဟေ့.. "
« Reply #488 on: August 13, 2011, 10:25:42 AM »
" က မ္ဘာ့ အံ့ ဖွယ် "
ပေါကြောင်ကြောင်နိုင်သည် ဟု အများက သတ်မှတ်ထားသည့် ငယ်သူငယ်ချင်းကို
နာမည်ကြီး ၀တ်လုံတော်ရ က မေးသည် ။
" သူငယ်ချင်း.... လောကမှာ ထူးဆန်း အံ့သြစရာ အကောင်းဆုံးဟာ ဘာလို့မင်း
" ရိုးသားတဲ့ ရှေ့ နေ နဲ့မီးလောင်နေတဲ့ မြစ် "
" မ ကြိုက် တာ ယူ "
" ငါ့မြေးလေးရဲ့မွေးနေ့ မှာ ဖွားဖွား ဘာ လက်ဆောင် ပေးရမလဲကွယ့် "
" ဓါတ်ပြား ပေးပါ "
" ဘယ် ဓါတ်ပြား ၀ယ်ပေးရမလဲဆိုတာ အဖွားမှ မသိဘဲ.. "
" ဓါတ်ပြားတွေ တောင်းပြီးတော့ အရင် နားထောင်ကြည့်ပေါ့.. အဖွား မကြိုက်တာ
တွေ့ ရင် ၀ယ်သာ ၀ယ်လိုက်ပေတော့... "
« Reply #489 on: August 13, 2011, 10:33:24 AM »
" အ စီ အ စဉ် အ တိ အ ကျ ပြော "
ဆရာမက တပည့်များကို ပြောသည် ။
" ကလေးတို့ ရေ... ဒီနေ့ညပိုင်းမှာ လကြပ်လိမ့်မယ်.. အင်မတန် ဖြစ်ခဲတဲ့ ကိစ္စ
အဲ့ဒါကြောင့် ကလေးတို့ အားလုံး လကြပ်တာကို ကြည့်ကြလိမ့်မယ်လို့ဆရာမ
တပည့်များအားလုံး... တစ်ပြိုင်တည်း ၀ိုင်းမေးကြသည် ။
" ဘယ် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းက ပြမှာလဲ ဟင် "
" တစ် လ တစ် ခါ ဆို တော် ပြီ "
ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်က မိမိ၏ အလုပ်သမားကို မေးသည် ။
" လုပ်အားခကို တစ်ပါတ် တစ်ခါအစား တစ်လ တစ်ခါပဲ ပေးပါလို့မင်း
ဘာဖြစ်လို့မေတ္တာရပ်ခံနေရတာလဲ.. "
" တစ်လ တစ်ခါပဲ မိန်းမနဲ့ရန်ဖြစ်ချင်လို့ ပါ.. "